आयल निगमको ट्यांकरहरुको नयाँ धन्दाः नेपाल छिर्दा इन्धन र फर्कदा गाँजा ! - Gokarna News
आयल निगमको ट्यांकरहरुको नयाँ धन्दाः नेपाल छिर्दा इन्धन र फर्कदा गाँजा !
काठमाडौं– नेपाल आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङकरबाट भारततर्फ अवैध लागू औषध गाँजाको तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा खटिएको टोलीले आज ट्याङकरभित्र लुकाई राखेको २ सय ९५ केजी गाँजाको चिप्पड बरामद गरेको हो ।
ना ४ ख ३९६९ नम्बरको ट्याङ्करको ५ वटा चेम्बरमध्ये दुई वटामा गाँजा लुकाएर तस्करी भइरहेको पाइएको हो । प्रहरीले ट्याङकरका चालक ३८ वर्षीय प्रल्हाद ठकुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । भारतको रक्सौल पु¥याए वापत ४० हजार रुपैयाँ पाउने चालकको बयान छ ।
तस्करले नेपालमा किलोको ४ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म गाँजाको चिप्पड किनेर भारतमा भारु ५ देखि ८ हजारसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको छन् । बरामद गरेको गाँजाको मूल्य करीब ४५ लाख रुपैयाँको भएको प्रहरीको दावी छ ।
काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित झ्याप्ले खोलामा लोड गर्न लाग्दा प्रहरीले पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।